မင်းအတွက်ပါ… – Grab Love Story
ပြွတ်….. ပြွတ်…… ပြွတ်…… ပြွတ်……
အ့…… အ့…….. အ့…….. အ့……..
“နွယ် ကောင်းလားဟင်……… အား………… အား………..”
ကြင်စဦးထဲက ချစ်ပွဲ အလီလီနွဲခဲ့ကြတဲ့ သန့်ဇင်နဲ့ သက်နွယ်တို့နှစ်ယောက် သောက်လေသောက်လေ ငတ်မပြေတဲ့ ဘဝရဲ့ အရသာကို နေ့စဉ် သောက်သုံးခဲ့ကြတာ ခုဆိုရင်တော့ ရာသီပင်တစ်ခါပြောင်းခဲ့ပြီပေါ့
“နွယ်……….. ကို့ကို နွယ်ရဲ့ နို့လေးတွေ ပေးစို့ပါလားကွာ”
“ဟာ…. ကိုကလည်း လုပ်စရာရှိတာပဲလုပ်ကွာ နွယ့်ဟာလေးတွေပုံ ပျက်လိမ့်မယ်”
အ့……….. အ့……….. အ့……… အ့………..
“အွင့်…. အွင့်….. တိုဦးကွာ…. အွင့်….. အွင့်…..”
“ကိုမညစ်ပတ်နဲ့ကွာ နွယ့်ရဲ့အလှတွေပျက်ကုန်မယ်ကွ ဒီမှာgym တွေဆော့ထားရတာ”
သက်နွယ်က သန့်ဇင်ရဲ့ ရင်ဘတ်ကိုတွန်းကာ တအားမလုပ်ဖို့ တားနေတော့သည်။ သန့်ဇင်ကတော့ သက်နွယ်ရဲ့ တားဆီးချက်တွေကို အလိုသိပ့်မကျချင်တော့ပေ။ သက်နွယ်က ကျောင်းမှာထဲက အလှပဂေး queen တစ်ယောက်မို့ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကိုတသသနှင့် အလေးနက်ထားလှသည်။ သန့်ဇင်မှာ သက်နွယ်ကို ရခဲ့သည်မှာ ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သော်လည်း သက်နွယ်ရဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေကတော့ သန်ဇင်အတွက် ကံဆိုးမှုပင် ဖြစ်နေသည်။ သက်နွယ်က အလှပကို တန်ဖိုးထားသူမို့ သန့်ဇင်နှင့် ကာမဆက်ဆံသည့်ခါတိုင်းလဲ လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးပုံစံသာ လက်ခံခဲ့သည်။ ကျန်သည့်နည်းများကိုတော့ တင်ကျသွားမည်တို့ နို့တွဲလာမည်တို့ ခန္ဓာကိုယ် ပုံပျက်မည်တို့ စသည့် အမျိုးမျိုးသော သတ်မှတ်ချက်များအပြင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ပါးစပ်ဖြင့် ပြုစုပေးခြင်းများကိုပါ ကန့်သတ်တားစည်းထားသည်။ သန့်ဇင်မှာတော့ သက်နွယ်ကို ရသည်ကလွဲလို့ ကျန်တာဘာတစ်ခုမှ အဆင်ပြေပေ။ သို့သော်လည်း သူအသက်ထက်ချစ်ရသည့် သက်နွယ်ကို ရသည်ကပင် သူ့အတွက် အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေတော့သည်။
“ကိုသန့်ဇင်…. ကားကိုကြည့်မောင်းပါဗျ ခင်များနဲ့ လိုက်ပြီး အရောင်းထွက်ရတာလဲ ဘုရား တနေရတယ်”
ဘေးကအရောင်းဝန်ထမ်း ငထူးက ပြောမှ မျက်လုံးကို ပြူးပြီး ကားကိုသတိထားမောင်းလိုက်ရသည်။
“ညက gameဆော့ရင်း အိပ့်ရေးနည်းနည်း ပျက်သွားလို့ပါကွ”
“ဟုတ်ရဲ့လား ကို့လူရယ် ညကခင်များမိန်းမ အလှပဂေးလေးကို တွယ်တာများသွားလို့ မဟုတ်လား”
“ဟား… ဟား….. မဟုတ်ပါဘူးကွာ မင်းကလဲ”
“အကိုရယ် လိမ်မနေစမ်းပါနဲ့ ကျွန်တော်သာ အကို့နေရာမှာဆို အသာကုန်ဖြုတ်မှာသိလား”
“အေးပါကွာ မင်းဆိုရင်တော့ဟုတ်မှာပေါ့ကွ ငါကငါ့မိန်းမကိုချစ်တယ်ကွ”
“ဟား…. ဟား…… အကိုလိုလူကတော့ရှားပါတယ်ဗျာ… ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးကတော့ အသာကုန်ဖြုတ်တဲ့သူကြီးပဲ”
“အမယ် မင်းကမိန်းမမရှိပဲ ဖြုတ်တယ်ပေါ့”
သန့်ဇင်ကတော့ ငထူးနှင့်စကားပြောရင်း မသိစိတ်က ကာမစိတ်များထကြွလားပြီး သူ့လီးက အလိုလိုထလာသည်။ စိတ်ထဲတွင်လဲ တစ်ခါမှမတွေးဖူးသော စိတ်အတွေးများစိုးမိုးလားသည်။ “သက်နွယ်သာ ငါနဲ့မရဘဲ တစ်ခြားကောင်နှင့်ရရင် အသာကုန်ဖြုတ်ခံရမှာပဲ”ဆိုတာက သန့်ဇင်စိတ်ထဲတွင် ကြီးဆိုးလာသည်။
သန့်ဇင်မှာ ညရောက်တော့သက်နွယ်နှင့် ကြမ်းကြမ်း လိုးဖို့ အစပြုသော်လည်း သက်နွယ်ငြင်းချက်များကြောင့် ပြီးအောင်ပင်မလိုဘဲ ဆင်းလိုက်တော့သည်။ စိတ်ထဲတွင်တော့”ငါနဲ့မရဘဲ အလိုးကြမ်းတဲ့ကောင်နဲ့ ရရမှာ”ဟုသာ မှတ်ချက်ပြုလိုက်သည်။ ထိုနောက် ရေချိုးခန်းထဲဝင်ကာရေချိုးရင်း ဂွင်းထုရင်း လူပျိုထဲက စွဲလမ်းခဲ့သော သက်နွယ်အိုးကြီးကိုသာ မြင်ယောင်ရင်း ပြီးအောင်ထုလိုက်သည်။သက်နွယ်မှာ queen တစ်ယောက်မို့ တင်ရင်များမှာမို့မောက်ကာ မြင်သူယောက်ျားတိုင်း စွဲလမ်းရသည်သူဖြစ်သည်။ သက်နွယ်ရဲ့ အိနြေ္ဒ ရှိရှိနေထိုင်ခဲ့ပုံမှာလည်း သန့်ဇင်နှင့်ရမှသာ အပျိုရေ ပျက်ခဲ့သည်။
ထိုညမှလွန်သော် သန့်ဇင်တွင် စွဲလမ်းစိတ်တစ်ခု ရှိလာခဲ့သည်။ ထိုအရာကတော့ သက်နွယ်ကိုမှန်းကာ ထုခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သက်နွယ် ဘယလိုလေးနေလျှင် ဆက်ဆီ ဖြစ်သော ပုံစံရှိသည် စသောစိတ်ကူးယဉ်အတွေးများကြီးစိုးလာခဲ့သည်။ အပြာကားများ ကြည့်ကာ ထိုမင်းသမီးနေရာတွင် သက်နွယ်သာ ဘယ်လိုနေလိုက်လျှင်ဆိုကာ တွေးပြီး ထုလိုက်လျှင် သက်နွယ်နှင့် လိုးသည်ထက်ပင် သာလွန်သော ကာမရသကို ရလာသည်။
သက်နွယ်ကတော့ သန့်ဇင်မလိုးလေ သူမှရဲ့အလှမပျက်လေ ဟုဆိုကာ အေးအေးဆေးဆေးနေလာသည်။ ရာသီလာတော့မည့် ရက်များတွင်တော့ သက်နွယ်မှာ ယောက်ျားရဲ့ အလိုးကို ခံချင်သော်လည်း သန့်ဇင်က မစသောကြောင့် အလိုးမခံပဲနေနေရသည်။ မိန်းကလေးဘက်ကအရင်မစရ ဟူးသော ရှေးစကား များကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။
သန့်ဇင်မှာတော့ တစ်ရက်ထက်တစ်ရက်ဆိုးလာကာ ဂျပန်မုဒိန်း ဇာတ်ကားများနေရာတွင်ပါ သက်နွယ်ကို အစားထိုးလာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သက်နွယ်ကိုလိုးသော်လည်း ကြမ်းကြမ်းမလိုးချင်တော့ဘဲ ဇာတ်ကားထဲတွင် သက်နွယ်အား မုဒိန်းကျင့်ထားသည့်ဟု တွေးကာ ဖြေးဖြေးချင်း အရသာခံကာ လိုးလာသည်။ လိုးလျှင်လဲ စိတ်ကူးအတွေးနှင့်သာ လိုးသောကြောင့် သက်နွယ်အား အရင်လို ကြာကြာ မလိုးနိုင်တော့ပေ။ သက်နွယ်အား တခြားသူများက မုဒိန်းကျင့်ကာ လိုးသည်ဟု စသင်းစားလိုက်တိုင်း ခဏလေးအတွင်းသာ ပြီးသွားတော့သည်။
သက်နွယ်မှာတော့ အရင်လို ကြာကြာ အလိုးမခံရဘဲ ခဏလေးနှင်ဘ ပြီးပြီးသွားသောကြောင့် သက်နွယ်ရဲ့ ကာမကိုဆွပေးသလိုဖြစ်ပြီး ပိုပိုကာ ထန်လာသည်။
သန့်ဇင်ရဲ့ မွေးနေ့တွင်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ စုကာ KTVမှာ သောက်ကြစားကြသည်။ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဝိုင်တို့ ဘီယာတို့ သောက်ကြသည်။ ယောက်ျားလေးတွေကတော့ အပြင်းတွေကြီးသာ ချကြသည်။ ထိုပွဲတွင်တော့ သန့်ဇင်နှင့်အတူ အရောင်းထွက်သော ငထူးပါ ပါလာသည်။ ငထူးကလဲ လူငယ်ပေမို့ တွေ့သူနှင့်အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းနိုင်သောကြောင့် ခဏအတွင်းမှာပင် အဆင်ပြေပြေအပေါင်းအသင်းဖြစ်သွားသည်။
သက်နွယ်က အရင်ထဲက ပိပိရိရိရိုးရိုးအေးအေး နေတတ်သူမို့ မုန့်များနှင့်အမြည်းများကို သာလိုက်စားပြီးနေသည်။ ငထူးက သန့်ဇင်နားကပ်ကာ သက်နွယ်အား ဝိုင်သောက်အောင် ပြောခိုင်းသည်။ သန့်ဇင်လဲ သက်နွယ်ရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းချင်သည်မို့ ဝိုင်ထဲတွင် အရက်နည်းနည်းရောကာ သက်နွယ်အား ချော့ကာ တိုက်လိုက်သည်။ သက်နွယ်က ပထမပိုင်းငြင်းသော်လည်း အားလုံးက သောက်နေပြီမို့ ထပ်ကာ မငြင်းတော့ပဲ သောက်လခုက်သည်။
သက်နွယ်မှာ ပထမဆုံးခွက်တွင် ခါးလှသည်မို့မျက်လုံးကို မှိတ်ကာအကုန်သောက်ချလိုက်ပြီး မျက်နာကို ရှံ့တွကာထားသည်။ သက်ဇင်က အမြည်းလေးကျွေးကာ ရေတိုက်လိုက်မှ အဆင်ပြေသွားတော့သည်။ ထိုနောက်မှာတော့ ပထမခွက်သောက်ပြီးပြီမို့ နောက်ခွက်များမှာ အဝင်မခက်တော့ပေ။ သက်နွယ်မှာ သန့်ဇင်တိုက်သမျှသောက်ကာ တော်တော် ကောင်းလာသည်။ စကားများလဲ လိုက်ကာ ရောသောဖောသော ပြောလာတော့သည်။ ထိုချိန်တွင် သန့်ဇင်သူငယ်ချင်းများက djများဖွင့်ကာ တစ်ခန်းလုံး ဆူညံသောင်းကျန်းကာ ကကြတော့သည်။ ဒီညမှာတော့ အိနြေ္ဒရှင်မလေး သက်နွယ်မှာ စီးချက်များနှင့်ညီ ကခုန်နေလေပြီ။
ကနေသော သက်နွယ်အနားတွင် သန့်ဇင်ရဲ့သူငယ်ချင်း တွေ ဝိုင်းကာ က နေသည်။ သက်နွယ်ရဲ့ ကောက်ကြောင်းများမှာ မီးရောင်အောက်တွင် ဆက်ဆီ ကျကာ လှပနေသည်။ သန့်ဇင်လဲ အရက်ကိုသောက်လိုက် ကလိုက်နှင့် တော်တော် မူးကွဲနေသွားသည်။ ထိုညက သန့်ဇင်ရဲ့သူငယ်ချင်း သန်းဇော်က အိမ်ထိလိုက်ပို့သည်။ သန့်ဇင်လဲ မူးကွဲနေပြီမို့ အိမ်ရောက်တာနှင့် တန်းပြီးအိပ့်ပျော်သွားသည်။ ထိုနေ့ညက သန်းဇော်လဲ ချက်ချင်းပြန်သွားဟန်မတူ သူတို့ချင်းစကားပြောနေသည်များကို သန့်ဇင် ကြားနေရသည်။
သန့်ဇင်မနက်သုံးနာရီလောက်တွင် အပေါ့သွားချင်သောကြောင့် နိုးလာခဲ့သည်။ သန့်ဇင်လဲ ကုတင်မှဆင်းကာ toilet ကို တန်းသွားလိုက်သည်။ ထိုချိန် ရေချိုးခန်းထဲတွင်
“ဟင်…… နွယ် ဘယ်ချိန်ထဲက နိုးနေတာလဲကွ ရေတွေဘာတွေချိုးလို့ပါလား…”
“ကို နိုးလာပြီလား နွယ်က စောစောကမှနိုးတာ အမူးပြေကာစမို့ ရေချိုးချင်တာနဲ့ ချိုးနေတာ “
“အော်…… ဟုတ်လား……. ကိုလဲမနေ့ညက ဘယ်လိုအိမ်ပြန်ရောက်လဲတောင်မမှတ်မိဘူး “
“ဘာရယ်တာလဲ နွယ်ရဲ့… “
“ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုရယ်….. ကဲပါပြန်အိပ့်တော့လေ နွယ်လဲရေချိုးပြီးအိပ့်တော့မှာ လူကနုံးပြီးညောင်းနေတုန်းမို့”
သန့်ဇင်လဲ အပေါ့သွားပြီးတာနဲ့ အိပ့်ခန်းထဲကိုပြန်ဝင်လာလိုက်သည်။ စိတ်ထဲတွင်တော့သက်နွယ် ထူးခြားနေတယ်လို့ ခံစားနေရသည်။ လူကလဲမူးနေပြီမို့ ဆက်ကာအိပ့်လိုက်တော့သည်။
“ကိုသန့်ဇင် ဘယ်လိုလဲဗျ မနေ့ညကတော်တော်မှ ကောင်းရဲ့လား”
“ကောင်းချက်ပဲကွာ အိမ်တောင်ဘယ်လိုပြန်ရောက်သွာလဲ မသိဘူး”
“မနေ့ညက ခင်များသူငယ်ချင်း ကိုသန်းဇော်လိုက်ပို့တာလေ ခင်များသူငယ်ချင်းကလဲ ခင်များထက် မသက်နွယ်ကိုပဲ ပိုဂရုစိုက်နေလားလို့ “
“ဒီကောင်က ငါ့သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးပါကွာ သက်နွယ်နဲ့လဲ ရင်းနီးတယ်လေ”
“ဟုတ်ပါပြီဗျာ…… ကျွန်တော်ကခင်များ အတွက်ပါ”
သန့်ဇင်လဲ ငထူးပြောမှသတိထားမိသည်။ သူအိပ့်ပျော်သွားတော့ သန်းဇော်နဲ့သက်နွယ် ဘာလုပ်နေကြသလဲမသိ။ ထိုအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်သည်နှင့် သန့်ဇင် ရင်တွေတဒုန်းဒုန်း ဖြစ်လာသည်။ သန့်ဇင်မှား သူ့ကိုယ်သူ အံဩလာသည်။ သန်းဇော်နှင့် သက်နွယ် ညကလိုးလိုက်ကြလားလို့စဉ်းစားလိုက်သည်နှင့် စိတ်မတိုးပဲ လီးက အလိုလို ထော်မတ်လာသည်။ သန့်ဇင်မှာ ဘယ်လိုမှမနေနိုင်တော့ပဲ ရုံးပြန်ရောက်သည်နှင့် toilet ထဲဝင်ကာ ထုလိုက်ရတော့သည်။
ညနေအိမ်ပြန်ရောက်တော့ သက်နွယ်ကို အိမ်တွင်မတွေ့ရပေ။ အပြင်ခဏသွားတာနေမှာပါဆိုပြီး ရေကိုသာအရင်ချိုးလိုက်တော့သည်။ သူရေချိုးပြီးခါနီးမှ သက်နွယ်ပြန်ရောက်လာသည်။ သန့်ဇင် ရေချိုးပြီးထွက်လာချိန်တွင် သက်နွယ်လဲ ရေချိုးဦးမည်ဟုဆိုကာ ရေချိုးခန်းထဲကို တန်းဝင်သွားသည်။ သန့်ဇင်အခန်းထဲတွင် ပြန်ရောက်သော အချိ်န်တွင် အိပ့်ခန်းထဲမှ သက်နွယ် ချွတ်ထားခဲ့သော အဝတ်များကို တွေ့သည်နှင့် ရင်တွေတဒိန်းဒိန်းခုန်လာသည်။ ထိုနောက်လက်များတုန်ရီစွာနှင့် အဝတ်စားများကို မွှေကာ အတွင်းခံလေးကို ယူကြည့်လိုက်သည်။ ထိုချိန်တွင် သူထင်ထားသည့်အတိုင်း သက်နွယ်၏အတွင်းခံတွင် အရေးများနှင့်စိုကာ ကွက်နေသည်။ သန့်ဇင်နမ်းကြည့်လိုက်ချိန်တွင် ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့သုတ်ရည်နံကို ချက်ချင်းရလိုက်သည်။ သေချာသည် သက်နွယ် တစ်ယောက်ယောက်နှင့် အလိုးခံလာပြီဖြစ်သည်။